Ciidamada Dalka Nigeria oo Weerarkii u Danbeeyay ku Qaaday Xarunta Ugu Weyn ee Ururka Boko Haram (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Ciidamada milatariga ee dalka Nigeria ayaa bilaabay howlgalkii ugu dambeeyay oo ay sheegeen inay kusoo afjaraan dagaalka ay kula jiraan kooxda la magacbaxday Boko Haram ee ka dagaalanta waqooyiga dalka Nigeria.
Howlgalkan oo loogu magacday Weerarkii ugu dambeeyay ee Boko Haram, ayaa isbuucan ka bilaawday dhulka Keynta ah ee looyaqaano (Sambisa Forest).
Ciidamada Milatariga dalka Nigeria oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ayaa gudaha u galay dhulkaasi Keynta ah ee ay ku sugan yihiin Maleeshiyaadka Boko Haram.
Militeriga Dalka Nigeria ayaa inta badan kala Wareegay Kooxdaasi dhulka keymaha ah ee ay ku dhuuman jireen.
Duulaankan kama danbeysta ah ayaa waxaa ku dhawaaqay Madaxweynaha dalkaasi Nigeria Mr. Maxamadu Bohari oo ah nin Muslin ah oo dhawaan la doortay.